Mibolerone အမှုန့် (3704-9-4) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / Trenbolone အမှုန့်စီးရီး / Mibolerone အမှုန့် (3704-9-4)
SKU: 3704-9-4. Categories: Trenbolone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Mibolerone မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (3704-9-4) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Mibolerone အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
ဓာတုအမည်များ: dimethylnortestosterone, Mibolerone အမှုန့်
အခြားအမည်များ: Matenon, Mibolerone အမှုန့်ပေါက် Check, စစ်ဆေးမှုအမှုန့်, ဒီမေးခွန်း-904, 3704-9-4 စစ်သွေးကြွ
ဒီ Steroid တစ်မျိုး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကိုယ်ဝန်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးသမီးခွေး၏ရာသီစက်ဝန်းနှောင့်အယှက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အများအပြား Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းနှင့်ဝသကဲ့သို့, ဤတိရိစ္ဆာန်ဆရာတန်းလည်းပါဝင်သည်, ကအားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလတစ်ဦးအသုံးပြုခြင်းကိုတွေ့ရှိရကြောင်းစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရှည်လျားမဟုတ်ခဲ့ပေ။
စစ်ဆေးမှုများအစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအများဆုံးဖြစ်ပွားဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ဒါဟာအစအစဉ်အဆက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖန်ဆင်းတော်မူသောအများဆုံးပြဿနာ steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကာယဗလသို့မဟုတ်အားကစားသမားအသုံးပြုသောတစ် Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်ပေ။ သငျသညျအမြားဆုံးက၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို Pre-ရန်ပွဲသို့မဟုတ်အလေးမအားကစားပြိုင်ပွဲကန့်သတ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တချို့ကကာယဗလ Pre-ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအပိုတွန်းအားပေးဘို့နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်ချွတ်-ရာသီအတွက်ကူညီရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အလွန်ဘုံကာယဗလ Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ဆက်လက်အဖြစ်ကျနော်တို့အများကြီးကာယဗလမှအယူခံဝင်၏ဤ Steroid တစ်မျိုးရဲ့မရှိခြင်းကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။
အများစုမှာအားကစားသမားများကြိုတင်လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်ယှဉ်ပြိုင်ရန် 5min အကြောင်းကို 30mgs အကြောင်းကိုကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာ cardarine မှလွဲ. ဘာမှမနှင့်အတူ "stacked" တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်မီအရေးကြီးသောသင်တန်းသို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲကိုအသုံးပြုသည်။ ရှိပြီးသားစတီရွိုက်၏လေးလံသောဆေးများ အသုံးပြု. အတော်များများအားကစားသမားတစ်ဦး Pre-ဖြစ်ရပ် Enhancer အဖြစ်စစ်ဆေးမှုများပေါက်ထဲမှာထည့်ပါ။
check Drop နှုတ်ယူနေကြသည်နှင့်နေ့စဉ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဆေးများပုံမှန်အား 200-300mcg တစ်နေ့လျှင်အကွာအဝေးအတွင်းလဲကျပေမယ့်အချို့ကိစ္စများတွင်တစ်နေ့လျှင် 500mcg မှတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ဆေးများကိုအမြဲလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း, တစ်ဦးရန်ပွဲသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်မတိုင်မီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30-40 မိနစ်မတိုင်မီယူနေကြသည်။ ဒီ Steroid တစ်မျိုးလူ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆေးပညာကိုအသုံးပြုဖူးအဖြစ်အကြံပြုမျှကုထုံးဆေးများရှိပါသည်။
ဘယ်လို Mibolerone အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
ပေါက် Check အားလုံးယှဉ်ပြိုင်သောနေ့၌ကျူးကျော်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်၏ရည်ရွယ်ချက်, ကာယဗလ, ပါဝါ lifters ခွန်အားအားကစားသမားများနှင့်တိုက်လေယာဉ်များကအသုံးပြုနေကြသော Steroid တစ်မျိုး Mibolerone အမှုန့် (CAS 3704-9-4), တစ်အရည်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ရုံ 30 မိနစ်ယှဉ်ပြိုင်မှုမပြုမီအသုံးပြုသောအခါ, ပေါက်ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ အသုံးပြုသူတိုးပွားလာကျူးကျော်, အာရုံနှင့်ယှဉ်ပြိုင် drive ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Steroid တစ်မျိုးကိုမဆိုတိုက်ရိုက်စိတ်ကြွဆေးဆံ့မခံပါဘူးသော်လည်းအန်ဒရိုဂျင် Overload တစ်ဦးစီကတဆင့် CNS (ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်) အပေါ်အလွန်သိသာအရေးယူဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်သားအကျိုးအမြတ်ဒီမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူ unnoticeable ဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်, ဒီမူးယစ်ဆေးအားကစားသမားအသုံးပြုတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြား steroids နှင့်အတူဘုံဖြစ်ပါသည်တူသောအားကစားသမားတစ်ဦး "သံသရာ" ၌စစ်ဆေးမှုပေါက်သုံးပြီးဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ရင်သို့ရာတွင်သို့မဟုတ်မည်သည့်စစ်မှန်သောသက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ ဒါဟာ Steroid တစ်မျိုးတိုးပွားလာကျူးကျော်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု drive ကိုအဘို့ရှေးခယျြမှု၏ Pre-ဖြစ်ရပ် Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်အစိုင်အခဲပြောဆိုချက်ကိုအကူတိုင်များစိုက်ထူထားပြီးပုံရသည်။ သို့သော်ကြွက်သားထုထည်မစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကျိုးအမြတ်ကြောင့်ကသေးငယ်တဲ့ 2mg ဆေးများအတွက်တိုတောင်း5ရက်သတ္တပတ် span သာသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီမူးယစ်ဆေးအပေါ်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ပေါ်မှာမဆိုပိုပြီးအချိန်, ဒါမှမဟုတ်လေးလံထိုး, နှင့်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအံ့ဆဲဆဲဖြစ်ကြသည်။
အရေးကြီးမှတ်ချက်: သဘာဝပြန်လည်နာလန်ထူမျှထိခိုက်ပျက်စီးမှုကတော့ Hypothalamic-Pituitary-Testicular-ဝင်ရိုးတန်းပြုသည်မဟုတ်, ကြိုတင်အနိမ့်အဆင့်ကိုခွအေနအေတည်ရှိကြောင်းခံခဲ့ရသည်ယူဆတယ်။
· Hepatotoxicity: အားလုံး C17-aa ဟို steroids လိုပဲ Drop အသည်းမှအဆိပ်သင့်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ တဦးတည်း C17-aa Steroid တစ်မျိုးကနေလာမယ့်မှအဆိပ်အတောက်နှုန်းနှင့်အရေးပါမှုကိုအလွန်ကွဲပြား; အချို့အဆိပ်သင့်ပေမယ့်အနည်းငယ်ဒီတော့ဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်ဤအပျော့စားတစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။ Drop အားလုံး C17-aa steroids ၏အသည်းအင်ဇိုင်းတွေအပေါ်အပြင်းထန်ဆုံး, ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများတဦးတည်းရှိနိုင်ပါသည်စစ်ဆေးပါ။ အသည်းတန်ဖိုးများကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်မည် strain အများကြီးအသည်းအပေါ်ထားရှိပါလိမ့်မည်။
သငျသညျအသည်းရောဂါရှိပါကသင်သည်ဤ Steroid တစ်မျိုးမသုံးသင့်ပါတယ်။ အသုံးပြုခြင်းသာ 2-3 ရက်သတ္တပတ် max မှထားရှိမည်ရပါမည်နှင့်အခြား C17-aa Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူမသုံးသင့်ပါတယ်။ အများအပြားလည်းအသည်းအဆိပ်သင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤသာနောက်ထပ်အသည်း strain ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်အဖြစ်တန်ပြန်ကျော်ဆေးဝါးများလည်းလာသောအခါဖြစ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူအသည်းသန့်စင်နှင့်အတူအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်စဉ်အတွင်းအရက်သေစာသုံးစွဲမှုရှောင်ရှားကြောင်းလည်းအရေးကြီးပါသည်။ ဤအရာများကိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်အသည်းရောဂါများဖြစ်ပေါ်စေစေခြင်းငှါ, အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုညာဘက်အရာအားလုံးကိုလုပ်နေလျှင်ပင်ကြီးမြတ်ပေမည်။
စစ်ဆေးမှု Drop များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမြောက်မြားစွာရှိပါသည်။ ဒီအစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအန္တရာယ်အရှိဆုံးဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးမှု Drop ၏ဘေးထွက်ဒီမည်သူမဆိုအစဉ်အဆက်ကယ့်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်တဲ့ Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါခွန်အားဖြစ်ကြ၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတော်ကြာပိုကောင်းရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ တစ်ဦးရန်ပွဲသွေးဆောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဤသူ Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူဆုလာဘ်ထင်ရှားသောလိမ့်မယ်ရှေ့တော်၌ထိုတိုးလာကျူးကျော်ပြောကြပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီသေဆုံးပါလိမ့်မယ်မဆိုလိုပါ, ထိုသို့စစ်ဆေးမှုများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဘို့အဖြစ်နိုင် (သူတို့လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး) တစ်ဒီဂရီမှရှောင်ကြဉ်ခံရဖို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။
·အီစထိုဂျင်: ဤ Steroid တစ်မျိုးတစ် progestin ဖြစ်ပြီးအကြီးအကျယ် aromatizes အဖြစ်အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသို့မဟုတ် Drop Check အလွန်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ကြသည်။ စစ်ဆေးမှု Drop ၏ဘေးထွက် gynecomastia, ရေ retention ကိုများနှင့်ပြင်းထန်သောရေ retention ကိုနဲ့ဆက်စပ်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်အားဖြင့်သက်တမ်းဒီတော့တိုတိုဖြစ်ပြီး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်အသုံးပြုသောဆေးများအီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှုကိုမကြာခဏမြင်ကြကြသည်မဟုတ် (ကကျူးကျော်တိုးမြှင့်ဖို့အနည်းငယ်သာ Mibolerone အမှုန့်ကြာ) အနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။
Anastrozole (Arimidex) ကဲ့သို့သော Aromatase inhibitors များအသုံးပြုမှု (AI အရဲ့) စစ်ဆေးမှု Drop ၏အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုငျသညျ။ ဤသည်နှင့် ပတ်သက်. အီစရိုဂျင်နှင့်အဓိကချို့ယွင်းကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အီစထိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုပြဿနာများနေဆဲအချို့အမျိုးသားများတွင်တည်ရှိနေရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
·အန်ဒရိုဂျင်: စစ်ဆေးမှု Drop ၏အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအထီးပုံစံဆံပင်ကိုရိတ်ဖို့ predisposed ယောက်ျားအတွက်ဝက်ခြံ, ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်တိုးတက်မှုနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ စစ်ဆေးမှု Drop ၏အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက် virilization လက္ခဏာတွေပါဝင်နိုင်ပါသည်; တကယ်တော့အချို့အဆင့်မှာ virilization နီးပါးစိတ်ချစွာဖြစ်ပါတယ်။
·နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ: စစ်ဆေးမှု Drop များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပြင်းထန်သည့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသဘာဝတရား၏ရှိသူများပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးလက်စထရောနဲ့သွေးဖိအားအပေါ်အလွန်ကြမ်းတမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ HDL လက်စထရော (ကောင်းသောလက်စထရော) နှင့် LDL လက်စထရော (မကောင်းတဲ့လက်စထရော) မှာသိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီအတိတ်သို့မဟုတ်ပစ္စုပ္ပန်ကိုမဆိုတည်ဆဲနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအခြေအနေများ, ရှိပါကသူသည်ဤ Steroid တစ်မျိုးမသုံးသင့်ပါတယ်။
ဒီ Steroid တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုပါသူများသည်သူတို့တစ်တွေနှလုံးသွေးကြောဖော်ရွေလူနေမှုပုံစံစတဲ့အသကျရှငျနေသေချာချင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြည့်နှက်ဆီနဲ့ရိုးရိုးကြားထဲမှာအိုမီဂါဖက်တီးအက်ဆစ်ကြွယ်ဝခြင်းနှင့်အနိမ့်ဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာအစားအစာအလွန်အမင်းအရေးကြီးလှသည်။ ပုံမှန်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဤမျှလောက်ကလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဖွစျနိုငျပါလျှင်ဒီတော့ဒီ Steroid တစ်မျိုးသင်တို့အဘို့မဟုတ်, အစအလွန်အရေးကြီးသည်။ အသုံးပြုသူများကိုလည်းလက်စထရောဓါတ်တိုးနှင့်အတူဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အလွန်နီးကပ်မျက်စိစောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။
· testosterone: Drop သင့်ရဲ့သဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုဖိနှိပ်မည်သိသိသာသာဒါပြုကြလိမ့်မည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ နိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအခွအေနေရှောင်ကြဉ်ခံရဖို့ပါလျှင် exogenous testosterone ဟော်မုန်းများအသုံးပြုမှုအလွန်အရေးကြီးသည်။ အသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်အားဖြင့်ရေတိုဒီ Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ပေမဲ့, အသုံးပြုမှုကြာချိန်ဟာ Steroid တစ်မျိုးနှင့်မလိမ့်မည်သည့်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်ပွားသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုကိုရှောင်ကြဉ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီ Steroid တစ်မျိုး၏အသုံးပြုမှုကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်စတီရွိုက်စနစ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြပြီးတာနဲ့, သဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုတဖန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင် Post Cycle ကုထုံး (ရာခိုင်နှုန်း) အကြံပြုသည်။ ဤသည်ပြန်လည်နာလန်ထူတိုးတက်စေတော်မူမည် အဲဒါကိုအာမခံမည်မဟုတ်ကြောင်းဖြည့်စွက်မည်မဟုတ်ပေမယ့်အကောင်းပြန်လည်နာလန်ထူ၏လေးသာမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးစတီရွိုက်နှင့်ဝသကဲ့သို့မရှိသအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူတစ်အန္တရာယ်အမြဲဖြစ်တယ်, အသုံးပြုမှုကိုအစဉ်အဆက်ကစတင်ခဲ့သည်မတိုင်မီဒီစဉ်းစားရပါမည်။
AASraw ထံမှ Mibolerone အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို